QOOMAMO: Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu Pep Guardiola Ku Diiday In Uu Tababare U Noqdo Chelsea Oo Hadda Cadayn Buuxda U Ah Garashadii Iyo Dalabkii Uu Waqtigaas Maamulka Blues Hordhigay. - Gool24.Net
QOOMAMO: Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu Pep Guardiola Ku Diiday In Uu Tababare U Noqdo Chelsea Oo Hadda Cadayn Buuxda U Ah Garashadii Iyo Dalabkii Uu Waqtigaas Maamulka Blues Hordhigay.
Kooxda Chelsea ayaa wali la maskax guursan guuldaradii fadeexada ahayd ee ay Manchester City kala soo laabteen axadii iyaga oo aan wali helin kulan labaad oo ay isku ilawsiin karaan laakiin waqtigu isaga ayaa ah mid wax badan qeexa waxaana la soo helay xogta sababtii dhabta ahayd ee uu Pep Guardiola ku diiday in uu tababare u noqdo Chelsea ka hor intii aanu Man City heshiiska buuxa la gaadhin.
Bishii December 2015 kii maamulka kooxda Chelsea ayaa doonayay in ay la soo saxiixdaan Pep Guardiola laakiin macalinka reer Spain ayaa iska diiday isaga oo sabab cad oo uu hor dhigay maamulka Blues ayna u arag in ay wax xaqiiq ah ahayd balse ay maanta garanayaan sida uu Guardiola go’aankiisa ugu saxsanaa.
Wargayska Daily Mail ayaa mar labaad daabacay warbixin uu ka diyaariyay sababtii uu Guardiola ku diiday in uu shaqada Chelsea qabto iyada oo lagu xusay in macalinka reer Spain uu waqtigaas maamulka Blues u sheegay in ay u baahnaayeen toban saxiix si ay heerka uu doonayo u soo gaadhaan.
Iwareed Guardiola ku dhawaa ayaa markii Jose Mourinho shaqada markii labaad ee Chelsea laga caydhiyay waxa uu sheegay in Guardiola aanu ku qanacsanayn ciyaartoydii waqtigaas Chelsea joogay isla markaana uu maamulka Chelsea u sheegay in haddii uu shaqada qabanayo uu u baahnaa 10 saxiix oo xaalada kooxda ku badali lahaa.
Qoraalkaas ayaa sidan u dhignaa: “Ilwareed Garudiola ku dhaw ayaa muujiyay in aanu isagu ku faraxsanayn xaalada kooxda hadda, isla markaana waxa uu ka walwalsan yahay booska shaqadan waligiiba isbad-badalaya. Waxaa la fahansan yahay in uu kooxda u sheegay in ay u baahan yihiin 10 saxiix”.
Laakiin markii uu Guardiola iska diiday Chelsea ee ay aqbali waayeen dalabkiisii ahaa in ilaa toban saxiix ay kooxdoodu u baahnayd waxa uu ka degay Manchester City halkaas oo uu ku soo kordhiyay saxiixo uu ku dooday in ay noqon doonaan kuwa uu ay City ku tiirsanaan doonto muddo shan sanadood ama ka badan ah.
Guardiola waxa uu ku guulaystay saxiixyadii Gabriel Jesus, Leroy Sane, Bernardo Silva, Benjamin Mendy iyo xidigo kale oo la mid ah kuwaas oo uu Manchester City kaga dhigay kooxda Premier League ugu awooda badan isla markaana boos kastaba u haysata ciyaartoy aan kala dhicin.
Guardiola ayaa markii shaqada Chelsea laga caydhiyay Jose Mourinho waxa uu gartay in aanu xaaladii ay Blues ku sugnayd kooxda kula wareegi karin isla markaana waxa uu fahmay in shaqada tababaranimo ee Chelsea ayna ahayn mid laysku halayn karo iyaga oo waliba diiday saxiixyadii uu u arkayay in uu xaalada ku badali kari lahaa.
Haddii ay maanta Chelsea shaqada ka caydhiso Maurizio Sarri, waxay maamulka Blues wali taagnaan doonaan halkii ay saddex sanadood ka hor taagnaayeen markii uu Guardiola iska diiday in uu kooxooda qabto iyada oo sababta ugu wayni ahayd walalka uu ka qabay samir la’aanta maamulka sare ee Blues ee tababarayaasha iyo waliba tobankii saxiix ee uu dalbaday oo aan la aqbalin.